Une femme sans parfum est une femme sans avenir » Coco Chanel.
Photo: Toetra Raly John ***Les différentes notes d’un parfum: Un parfum se conçoit selon une pyramide olfactive divisée en trois parties : *les notes de tête (ceux sont celles que l’on perçoit dès la vaporisation) *les notes de cœur (plus voluptueuses, elles apparaissent au bout de 10 minutes environ) *les notes de fond (qui font […]
De quelle Marque ? Laboratoire VICHY Quand l’utilisé ? Chevelure clairsemée Manque de densité Manque de volume Information sur le produit : Sans paraben Sans silicone Hypoallergénique Resulat : Plus de Volume Plus de densité Fortifiant Bonne Tenue Ou le trouvez ? Pharmacie Métropole 7 Rue Ratsimilaho Antaninarenina 101 — Antananarivo — BP 410 metropole@metropole.mg […]
Ahoana no atao raha te hanala points noires ?
Ilaina foana ho an’ny vehivavy ny mikoja sy mikolokolo ny tarehy madio sy tsy misy « points noirs » dia ity misy fomba tsotra sady mora. Ny zavatra ilaina : 1- leviora 1 fonosana 2- ranona voasary makirana 3 sotrokely Ny fanaovana azy : – afangaroy ao anaty goro (recipient – PS) kely iray ireo fangaro ireo […]
Régime mampihena kibo.
Régime mampihena kibo. Ity regime iray ity dia natao indrindra ho an’ny olona bebe roroa sy andilana. Mety ho an’ny olona efa manaraka regime ihany koa. Ny tanjon’ity regime ity ny fampihenana kaloria miditra ao amin’ny vatana,ka tahirina kaloria ao ihany no ampiasainy hangalana hery. Izany no mampihena ny vatana sy ny kibo. Mandritra ny […]
Fomba fanalana ny ANGADRANO
Menaka oliva sy tongolo gasy : Hafanaina ny menaka oliva 1/4 kaopy. Arotsaka ao anatiny ny tongolo gasy voatoto tsara. Andraso vetivety,tandremo tsy hamay loatra anefa. Esory eo ambony afo ary ampangatsiaho avy eo. Raha efa izay dia hosory amin’ny hodi-doha ilay fangaro no sady ampiaraho amin’ny hotra mihodinkodina. Sarony « bonet » ny loha ary […]
IREO FAHAZARANA MAMPIKENTRONA HAINGANA NY HODITRA
Tsy mitanin’andro be : manafaingana ny fahanteran’ny hoditra ny fidanihana masoandro matetika. Mamotika ny « collagène » amin’ny hoditra mantsy ny taratry ny masoandro,hany ka lasa tsy mahavita ny asany intsony ity tsiry mpanentana manamboatra sy mikolo ny hoditra ity. Noho izany,ilaina ny manosotra « crème » miaro ny hoditra amin’ny tara-masoandro isan’andro. – Tsy mifoka sigara : […]
TONGOLO,MITSABO NY FIHITSANAM-BOLO
Olantsika vehivavy mihitsy ny fihitsanam-bolo satria,vao misy fikorontanana amin’ny vatana dia mitranga izy io. Ny volo anefa no manaingo ny vehivavy ka zava-dehibe loatra. Azo tsaboina ny volo mihintsana rehefa tsy mbola lasa lavitra. Ireto manaraka ireto no fomba tsotsotra maromaro mety ahitam-bokany haingana : -Manafaingana ny fanirin’ny volo ny tongolo satria manaitaitra ny […]
HODITRA BE MONY
MAHAKASIKA IREO FOMBA HIALANA HO AN’IREO MANANA HODITRA BE MONY NO PAIKA ATOLOTRA ANAO ANIO Olana goavana be mihitsy ny mony ho an’ny vehivavy,hany ka mitady izao fomba sy tetika rehetra izao hanesorana azy sy hisorohana ny tsy hipotrany intsony. Mazàna anefa no toa vao mainka mampirongatra azy ireny ny akora heverina fa hampiala azy. […]
FOMBA ATAO AHAZOANA VOLO BOUCLÉ
1- Maka lamba « satin » tapahana atao 10 na 15 pieces 2 – Sasana ny volo amin’ny shampooing et après shampooing 3 – Hamainina amin’ny lamba ny volo,tsy atao maina be fa atao mandomando 4 – Alaina ilay lamba kely avy notapahana tetsy amin’ny voalohany,maka 1,ary azo ahodina amin’iny ilay volo. Atao ohatrany ireny manao […]
ARTICHAUT : Manala angadrano,mampibontsina ny volo
Tsy voatery hatao sakafo na atao tambavy fisotro foana izy ity. Araka ny fantatra dia manampy betsaka amin’ny fikoloana ny volo izy io. – Mamibontsina volo : Manan-karena vitamina sy mineraly maro ny artichaut : ireo singa ireo dia mamelombelona,fa indrindra mampibontsina ny volo manify. Toy izao ny fanaovana azy : ampangotrao ao anaty […]